मधेशी जनता समेटदै तराई झर्र्यो एमाले, आमसभामा हजारौको सहभागिता-NepalKanoon.com
मधेशी जनता समेटदै तराई झर्र्यो एमाले, आमसभामा हजारौको सहभागिता
उदयपुर: एमाले पार्टीले तराई मदेशमा सुरु गरेको अभियान अन्र्तगत तराई झरेको एमाले आज उदयपुरको कटारीमा आमसभा गरेको छ । उल्लेख मदेशी जनताहरुको साथ र उपस्थितिमा भएको आमसभाका प्रमुख अतिथि एमालेका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले भने गरिव देशबाट धनी देश बनाउन चाहनुहुन्छ, गरिव जनताबाट धनी जनता बनाउन चाहनुनुहन्छ, दुःखी जनताबाट सुखी जनता बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यही संकल्पसाथ यहाँ उपथित हुनुर्भएको छ । त्यही संकल्पसाथ हामी यहाँ आएका हौ । एमालेको उद्धेश्य अरु केही हैन नेकपा एमाले यस देशलाई जोगाउन चाहन्छ । यस देशमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाओस्, यसको स्वाभीमानलाई थिचोमिचो गर्न नपाओस् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न यस राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, यसका जायज हितहरु र यसको स्वाभीमानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ । यसको प्रतिष्ठा माथि उठाउन चाहन्छ । १२५ जातजातिको, १२५ भाषाभाषीको, विभिन्न सम्प्रदायहरुको हिमाल पहाड र तराईका जनताको, पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न पेशा ब्यवसायमा भएका जनताको साझा फूलवारी यस देशमा हाम्रा विविधताहरु सुन्दरता र सम्पन्नताका रुपमा छन् । हामीसँग हिमाल छन्, हामीसँग पहाड छन्, हामीसँग जीव छन्, हामीसँग ताल छन्, हामीसँग उर्भर फाँटहरु छन्, खोलानाला र झर्नाहरु छन् तर प्रयोगमा आउन सकिरहेका छैनन ।
हामी विभिन्न प्रकारका भेषभुषा स्थान अनुसार, मौसम अनुसार, हावापानी अनुसार आ–आफ्नो पहिचानमा छौं । तर, त्यसलाई विभेदको विषय बनाएर जातजातिको नाममा, भाषाका नाममा संस्कृतिका नाममा वा भूगोलका नाममा विभेद छुट्याउने खालका कामहरु भइरहेका छन् । मधेस र पहाडका नाममा हामीबीचको एकता भाँड्ने डरलाग्दा र घिनलाग्दा प्रयासहरु भइरहेका छन् । हामीले ती अनुचित प्रयासहरुबाट देशलाई जोगाउनु पर्छ र राष्ट्रिय एकता बनाउनु पर्दछ । नेकपा एमालेको अरु केही उद्धेश्य होइन, नेपाली जनता जहाँसुकै बस्ने भए पनि जुनसुकै भाषा, धर्म संस्कृतिका भए पनि जुनसुकै पेशा ब्यवसायका भए पनि अधिकारसम्पन्न हुनु पर्दछ । उनीहरुले अवसर प्राप्त गर्नु पर्दछ । उनीहरुले असमानता र विभेदको शिकार हुनु हुँदैन । समान हक अधिकार र अवसर उनीहरुले पाउनु पर्दछ । सबैले सुरक्षा र सम्मानित जीवन विताउन पाउनु पर्दछ । नेकपा एमालेका उद्धेश्यहरु पनि यहि भएके बताए ।
केरुङ काठमाडौं, काठमाडौं पोखरा, पोखरा लुम्बिनी रेल्वेको योजना ऐमालेलेअघि बढाएका हो । त्यसको प्रारम्भिक सर्भे समेत सम्पन्न भईसकेको छ । अव थप प्रक्रिया अघि वड्ने बड्ने र कसैले चाहेर यसलाई रोक्न नसक्ने बताए ।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय एकता मार्फत यस सुन्दर र उर्भर देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ । यहाँहरु ढुक्क भए हुन्छ, नेकपा एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, न्याय र समानताको पक्षमा नेतृत्व गर्छ र अगुवाई गर्छ । विभिन्न समयमा नेकपा एमालेले सञ्चालन गरेका सरकारहरु यहाँहरुले देख्नु भएको छ । अहिले भर्खरै हामीले विकासको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गर्न चाह्यौं । लहर सिर्जना हुन थाल्यो । जनतामा आत्मविश्वास जाग्न थाल्यो । राष्ट्रिय स्वाभीमान उर्लेर आयो । नेपाली जनताका ओइलाएका र मुर्छित भएका सपनाहरु फेरि ब्युँझिन थाले । यो राष्ट्रको गौरव र स्वाभीमान फेरि जगमगाउन थाल्यो ।
यस देशलाई गरिव बनाउनु एउटा अपराध थियो, यसलाई गरिव बनाए शासकहरुले । नेकपा एमालेले भन्यो अव यस देशलाई गरिव बनाइरहन दिंदैनौं हामी । १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने, केही समयभित्रै लोडसेडिङ समाप्त पार्ने, विभिन्न ऊर्जाको बैकल्पिक ब्यवस्थापन गर्ने योजना हामीले बनायौं । तपाईंहरुलाई विश्वास नलाग्ला–चतरा, गाइघाट, कटारी, सिन्धुली र हेटौंडा, अव यो राजमार्ग तीन वर्ष भित्र कमसेकम चार लेनको हुन्छ । यो ठेक्कापट्टामा गइसक्या छ, अव कसैले रोक्न सक्दैन ।
यहाँहरुले देख्नु भएको छ, हामीले देशभरी बलिया र फराकिला बाटाहरु बनाउने अभियान सुरु गर्यौं । नेकपा एमाले जहिले सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ त्यसबेला अभियान सञ्चालन गर्छ । कहिले यो देशमा सकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अभियान सञ्चालन गर्यो, कहिले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने अभियान देशैभरी सुरु गर्यो । त्यो अभियानमा गाउँ गाउँमा बाटाहरु बने, स्कूलहरु बने, स्वास्थ्यचौकीहरु बने । कहिले यसले अब मरिहालिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका बुढाबुढीहरुलाई अव बाँचिन्छ भन्ने मनोवल प्रदान गर्यो । यसरी हामीले देशमा आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने थालनी गर्यौं ।
तपाईंहरुलाई लाग्ला एमाले सरकारबाट हटेको छ अव त्यो हुँदैनहोला । तर, एमालेले यस्ता आधारहरु बनाएको छ अव कसैले पनि नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेल चल्नबाट रोक्न सक्दैन, पूर्वपश्चिम रेल चल्छ । तपाईंहरुलाई विश्वास नलाग्ला–चतरा, गाइघाट, कटारी, सिन्धुली र हेटौंडा, अव यो राजमार्ग तीन वर्ष भित्र कमसेकम चार लेनको हुन्छ । तीन वर्ष भित्र हामी पुरानो राजमार्गलाई पनि चार लेनको गर्दैछौं । तीन वर्ष भित्र चार लेनको राजमार्ग बन्छ ।
हुलाकी राजमार्ग १९ वर्षदेखि गफै मात्रै सिमित थियो हामीले निर्माण सुरु गरेका छौं । उत्तर दक्षिण राजमार्गहरुको काम पनि अघि बढेको छ । तपाईंहरुले हेर्नु भयो होला टेलिभिजनमा म प्रधानमन्त्री हटेर अर्को प्रधानमन्त्री बनेसँगसँगै उहाँले प्रश्न गर्नु भो, रेल त चलाउने, बाटा त बनाउने तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर । उहाँलाई त्यो आपत परेछ । मैले अस्ती भेट्दाखेरि उहाँलाई भनेँ– पैसाको पीर परे मलाई भन्नुस् । पैसा कहाँबाट आउँछ हामीलाई थाहा छ हामी गर्न सक्छौं । पैसा समस्या होइन ।
म प्रधानमन्त्री हटेर अर्को प्रधानमन्त्री बनेसँगसँगै तपाईंहरुले टेलिभिजन हेर्नु भयो होला । उहाँले प्रश्न गर्नु भो– रेल त चलाउने, बाटा त बनाउने तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने ? उहाँलाई आपत परेछ । मैले अस्ती भेट्दाखेरि उहाँलाई भनेँ– पैसाको पीर परे मलाई भन्नुस् । पैसा कहाँबाट आउँछ हामीलाई थाहा छ हामी गर्न सक्छौं ।
म तपाईंहरुलाई आग्रह गर्छु, नेकपा एमाले बाहेक यो देशलाई अघि बढाउने, त्यसका लागि उभिन सक्ने पार्टी अर्को छैन । हाम्रा बहादुर पुर्खाहरुको रगत एमालेमा मात्रै छ । अरु पार्टीमा रहेका साथीहरुलाई लाग्ला हामीमा त्यस्तो रगत छैन ? म के भनौं, तपाईंहरु आफ्नो पार्टीका नेतृत्वको कुरा सुन्नुस् । आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले के भनिरहेको छ, के गरिरहेको छ त्यो बुझ्नुस् अनि विचार गर्नुस् । बलभद्रको रगत एमालेको अविरबाट सुरु हुन्छ । बलभद्रको रगत एमालेको प्रवेशपत्र र एमालेको सदस्यताबाट सुरु हुन्छ । बलभद्रको रगत एमालेलाई भोट हालेर सुरु हुन्छ । म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई भन्न चाहन्छु विकासको नेतृत्व एमालेबाट मात्रै अघि बढ्न सक्छ । म आग्रह गर्छु अव नअल्मिलिनुस् एमालेमा प्रवेश गर्नुस् । अव संसदमा चारवटा पार्टी पाँचवटा पार्टी मिलेर काम गर्ने सरकारलाई हटाउने स्थिति अन्त्य गर्नु पर्छ ।
अहिले विभिन्न हल्ला चलिरहेका छन्, सरकार परिवर्तनका लागि तीन दलीय सहमति भनेर संविधान संशोधनका कुरा चलिरहेका छन् । अन्त कतै घुँडा टेकेर, अन्त कतै कबुलियतनामा गरेर बिभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् । ती सम्झौता कार्यन्वयन गर्न सम्झौता गराउनेहरुले दवाव दिएका छन् । दवावमा झुकेर दवावमा लतारिएर त्यस्ता सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।